Xaqiiqooyin U Gaar Ah Filimka Ranver Iyo Deepika Si Run Ah Isugu Jeclaadeyn Ee Goliyon Ki Raasleela Ram-leela!! – Filimside.net
Xaqiiqooyin U Gaar Ah Filimka Ranver Iyo Deepika Si Run Ah Isugu Jeclaadeyn Ee Goliyon Ki Raasleela Ram-leela!!
November 15, 2018 Zakarie Abdi
Malaha waqtiga ayaa isku soo aadiyay waxaa lagu guda jiraa shalay iyo maanta guurka rasmiga ah ee lamaanaha caanka ah Ranveer Singh iyo Deepika Padukone maantana waxaa 5-sano kasoo wareegatay daawashada filimkii sabab u ahaa jaceylkooda inuu kasoo bilaawdo Goliyon Ki Raasleela Ram-leela!!
Fadlan Hoos Kaga Bogo Xaqiiqooyin U Gaar Ah Filimkaan Oo Maanta Oo kale La Daawaday 15 Nov 2013:
Xaqiiqada 1aad: Deepika Padukone waxay filimkaan ku qaadatay abaal marinta atiriishada ugu fiican ee shirkada Filimfare bixiso waana riyo u rumowdey xidigtaan waligeena ma ilaawi doono filimkaan.
Xaqiiqada 2aad: Atooraha lagu magacaabo Harshvardhan Rane ayaa door laga siiyay filimkaan balse wuu iska diiday sida awged waaba laga talo baxay doorki loo diyaariyay xidigaan.
Xaqiiqada 3aad: Kareena Kapoor Khan ayaa saxiixatay filimkaan waxayna isaga baxday 10-maalmood marka ay duubistiisa ka harsan tahay waxayna ka door biday sameynta filimka Karan Johar soo saaraha ka yahay Gori Tere Pyaar Mein.
Xaqiiqada 4aad: Imran Abbas Naqvi ayaa loo bandhigay doorka Ram ee filimkaan balse wuu iska diiday waxaana la dhihi karaa door muhiim ah ayuu iska diiday.
Xaqiiqada 5aad: Ranver iyo Deepika markee duubista filimkaan dhameyeen ayee si rasmi ah u saaxiiben ama lamaane Bollywoodka oodhan jaceylkooda ogaado noqdeen maadama ay shaaciyen jaceylkooda xidigahan.
Xaqiiqada 6-aad: Deepika dhaawac ayaa soo gaaray inta ay filimkan duubeesay halka Ranveer isagana xanuunka duumada ama Malaariyada asigoo ay ku qaatay inuu mudo kasoo kabto.
Xaqiiqada 7-aad: Ranveer ayaa filimkan Ram Leela iyo filimkiisa kale Gunday isku garab duubayay waana sababta keentay labadan filim isku muqaal inuu leeyahay inkastoo Ram Leela la daawaday 2013 halka Gunday la daawaday 2014 gaar ahaan bishii Febraayo.
Xaqiiqada 8-aad: Filimkan magaciisa marka hore wuxuu ahaa Ram-Leela balse maxkamada sare ayaa amartay in magaca laga badalo waxaana loo bixiyay Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela, madaama dad badan ku andacoodeen in magacyada Ram iyo Leela oo Hinduuga muqadis diini u ah sharafkooda meel looga dhacaayo.
Xaqiiqada 9-aad: Ram Leela wuxuu u tartamay 8-biladood oo Filmfare ah asigoo sedex ka mid ah lagu qaatay filimkan. Sidoo kalena abaal marinta IIFA Awards wuxuu u tartamay 9-biladood asigoo labo ka mid ah ku guuleestay oo abaal marinta filimka ugu wanaagsan ku jirto.
Waad Ku Mahad santahay Aqriskaaga.